China 100KW Small steel steel tube tube production for All in one cabinet igbt hf welder ifektri abakhiqizi | Mingshuo
Ukukhiqizwa Isingeniso somshini wokushisela we-hf we-100kw IGBT wombuso oqinile
Yamukela i-rectifier ne-inverter edidiyelwe yesakhiwo se-chassis, esendaweni encane futhi kulula ukuyifaka.
Kusetshenziswa ubuchwepheshe bokulawula amandla we-inverter wesigaba esigcwele + we-IGBT, i-factor ripple ingaphansi kuka-0.55, futhi i-transformer ephezulu kakhulu isetshenziselwa ukufaka esikhundleni se-transformer eyehlayo ukunciphisa ukulahleka kwethusi nokulahleka kwethephu, nokusebenza kahle kwe-inverter kuphezulu. Akunazintambo phakathi kwamakhabethe, kuqeda ukulahleka kolayini, wonke umshini wonga amandla kakhulu kunemikhiqizo yesizukulwane esedlule.
Isilinganiso Samanje 500A
Imvamisa Yokwakheka 350 ~ 600kHz
Uhla Kunconywe amapayipi ukuthi kungenziwa ashiselwe ngu 100kw HF Welder usayizi omncane ipayipi Welding umshini
Ipayipi ububanzi 6-32mm
Amapayipi odonga obukhulu 0.2-2.0mm
Amarowu wethawuli, amanetha wensipho, amatawuli okugeza ithawula, izingxenye zezimoto, izingxenye zezithuthuthu, ama-terminals ensimbi, izingxenye ezincane zezingxenyekazi zekhompyutha, izinto zokufaka amapayipi kagesi nokuqinisa, njll.
I-Main Design Index ye-IGBT SOLID STATE HF Welder
Langaphambilini Umugqa wokukhiqiza we-tube we-1000KW omkhulu we-tube-Series uxhumano lohlobo Solid state high frequency welder